Excerpts from Stories from Khin Hnin Yu’s Heart | အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Posted on6August 2009 by lettwebaw
This entry was posted in Excerpts by lettwebaw. Bookmark the permalink.
6 thoughts on “Excerpts from Stories from Khin Hnin Yu’s Heart”
kom on6August 2009 at 8:57 pm said:
lettwebaw on6August 2009 at 9:39 pm said:
မနောက်ပါနဲ့ အဒေါ်ရယ်… comments က ကြိုက်တဲ့လူ ရေးလို့ရပါတယ်။
ဆဲသွားတောင် အင်း… သဘောထားကြီး (ချင်ယောင်ဆောင်) စွာ ခံရမယ့် သဘောရှိပါတယ် အဒေါ်။
kom on 8 August 2009 at 12:08 pm said:
ဟုတ်လို့လား. ယုံဘူး။ မော်တော်ကားအနောကမှန် မှာ ဘာကပ်ထားဘူးသလဲပြောပါ။
komyintmyat on 31 August 2009 at 2:38 pm said:
စိတ်ဝင်စားသွားပြီ….. မော်တော်ကားအနောက်မှန်မှာ ဘာများကပ်ထားပါလိမ့်…..?
lettwebaw on 8 August 2009 at 2:59 pm said:
ကျွန်တော်တော့ ယုံပါတယ်။ “တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ”ဆိုသလိုပေါ့။ ရှေးဖြစ်ဟောင်း အောက်မေ့ဖွယ်ပါ။ ပြောင်းလဲခြင်းတွေရဲ့ သဘောကို ဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရမလားပဲနော်။
aye on5November 2009 at 7:48 pm said:
ဘာလို့ပြန်ပြန်ထုတ်ကြတာလဲ။ ပြန်ပြီး refresh လုပ်တယ်ခေါ်မလား။ အဲလိုလား။ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ ပြန်မှတ်မိရတာပေါ့။ ဟိုတုံးက ဖတ်တဲ့ စိတ်အထာနဲ့ ခု စိတ်အထာကလည်း မတူတော့ဘူးဆိုတော့ အခုပြန်ဖတ်တော့လည်း အတွေးသစ်တွေ ၀င်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အကုန်ဖတ်ပြီးသား အဟောင်းတွေချည်းပဲနော်။ ဖတ်ရင်းနဲ့ မဖြတ်နိုင်လို့ သူတို့မိသားစုအကြောင်းတွေ ပါတဲ့ စာအုပ်တွေ ပြန်ရှာဖတ်မိသေးတယ်။
ဘွားခင်နှင်းယုကို ပြောချင်တဲ့စကားတွေ ရှိလာတယ်။ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သောင်းလိုမျိူးကို ဘယ်မှာ သွားရှာရမလဲ ဆိုတာရယ်၊ တိကျပြတ်သားတဲ့ ဆရာဝန်မကြီးမိ အချစ်ကို ဘယ်လို လက်ခံခဲ့လဲ ဆိုတာရယ် သိချင်လာတယ်။ ဟဲ…ဟဲ။ ဆရာမကြီး မိကိုအားကျတယ်။ မရယ်ဘူး မပြုံးဘူး။ စိတ်ဓာတ် ပြတ်သားတယ်။ အဖေက စစ်သားမောင်းသလို မောင်းခဲ့တယ်။ သူက ပိုတိကျနေတယ်။ ဘွားခင်နှင်းယုက ဘေးကလိုမှပဲ ထိန်းပေးတယ်။ ဒါကြောင့် သားသမီးတွေရဲ့ မိဘတွေ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာတယ်။
နွားတစ်ထောင် ပြန်ရှာနေတာ။ မရသေးဘူး။ ကျွန်မချစ်သူကိုရော ပြန်ရှာတာ မရဘူး။
အင်း… ကျင်လည်ခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင် မတူဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိပေးရတယ်။ ကိုယ်ကကိုယ်၊ သူတို့က သူတို့လေ။